Kuronga Kuronga Chirongwa cheSocial Media
Muvhuro, March 8, 2010 Svondo, October 4, 2015 Matt Chandler
Ndichagara ndichiyeuka mudzidzisi wangu wezvekuchikoro chepamusoro, VaDhiil. Kunze kwekuzvidzora-kuzvidzora kwake pazvaive pachena kuti aida kutuka (? Zvakanaka… BUGS !?) kudzokorora kwake kushandisa cliches akakwanisa kuendesa zvimwe zvidimbu zvehungwaru muhuropi hwangu hwakawedzera mahormone. Pakati peaanoda:
Ukatadza kuronga, unoronga kutadza.
Zvino, izvi zviri pamberi pekugadzirwa kweanotyisa mapepa ekukurudzira ane mifananidzo yemuswe whale uye vanhu vanokwira makomo iwe aunoona mune ese mahofisi ehofisi. Kugoverwa kwemazano evachenjeri kwaive ndima yevabereki vako, vadzidzisi, uye PBS. Kunyangwe hunhu hwakashata hwezano rakadai, uyu akanamira neni.
Iye zvino muhupenyu hwangu hwehunyanzvi, kuronga kunotora chikamu chakakura chenguva yangu, uye nechikonzero chakanaka. Paunenge uchiisa pamwechete zvirimo uye zvemagariro vezvenhau zano, iro rakakosha basa ndere kusimbisa mapuratifomu uye masevhisi anonyanya kubatsira pane zvaunoda uye kuronga maitiro ako zvinoenderana.
Kwete chete kutora nzira yewilly-nilly kudzikisira yako hunhu hunhu, zvakare ine mari kupambadza. Pasina kuverenga kwakajeka kwezvakaitwa kupi - uye nguva yakashandiswa kuzviita - kuyedza kwako kwepamhepo kupambadza nguva nemari.
Chero chero chitoro chedhijitari chakakosha munyu wavo chinokuisira iwe kuronga kwavo. Kana vakasadaro, vabvunze nezvazvo. Kana ivo vasina uye haw kana vasina chaipo, tiza. Iwe unowana yako epamhepo kushambadzira bhajeti iri kudzikira uye usina kana chinhu chakanyanya kuratidza kune icho kunze kwekukanzurwa cheki.
Kusvikira izvozvi, kana kambani yako iri muchinzvimbo chekuenda nayo yega munzvimbo yedhijitari, ndinokurudzira zvikuru kuti utarise kwaMutungamiri weCMO kuSocial Landscape. Iyo iri yemagariro midhiya yekubiridzira pepa kune mabhenefiti uye zvikanganiso zvemapuratifomu epamusoro uye masevhisi. Kuongorora kwakaitwa na 97th Floor, uye iguru-shiti rezita gwara
Kune akawanda masocial network masevhisi kunze uko; hapana kana imwe chete iri yechokwadi, sekuyedza kushandisa ese asingashandi. Iko hakuna mhinduro imwe, hapana imwechete yemagariro midhiya nzira inoshandira mutengi wese. Nekuita kuronga kunofungisisa, kunovaka, unoshandisa zvakanaka nguva yako nemari.
Tags: seievanhu vezvenhaupasocial media landscapesocial media chirongwa
Nei Uchifanira Kunyoresa Nhasi
Zvemagariro Midhiya Kushambadzira ndezveSocial, Kwete iyo Midhiya
Kungotanga nesocial media uye kudzidza zvakawanda mazuva ese. Ndichiri kutsanangura kutarisa kwangu sezvandinofambira mberi. Yakanaka saiti pano! Kutarisira kuverenga zvakawanda.
Nekutaura kune mutsara wekuti "Kana ukatadza kuronga, unoronga kukundikana" ndingati ichokwadi chakazara. Yese bhizinesi yesocial media campaign inofanira kuva nezvainoreva, chinangwa uye chinangwa chekupedzisira. Iko kushandiswa kweSocial network kwakawedzera pazviuru mukana wemabhizinesi madiki kugadzira ruzivo rwemhando, kuvandudza basa revatengi, kuwedzera kutengesa uye kuvaka hukama. Chii chakakosha kana wagadzira chirongwa chako? Kuti uvepo, vaka nharaunda yako uye ita hanya nazvo!
Ndinokurudzira mhinduro inotevera http://bit.ly/aqAGbe paStartups.com, apo Maria Sipka anotaura hurongwa hwakadzama hwekuvaka nharaunda yako online.
BTW, unogona kuisa rako wega bhizinesi rine chekuita neQ&A's 😉
Ndiro rondedzero huru, Pete. Thanks nekuverenga uye kubatsira.
Saka vanhu vazhinji vanotadza kana kugadzirisa danho rekutanga (funga nezvezvauri kuda kuzadzisa) zvekuti mamwe maitiro anozoshaya basa. Pasina zvibodzwa zvakajeka uye zvinangwa zvekushandisa metrics, urikungopfura kutanga uye nekubvunza mibvunzo gare gare.